सलमान र कट्रिनाको बिबाह भएकै हो त ?
निशान न्युज असार २६, 2076
एजेन्सी । सलमान खानका फ्यानहरुका लागि पछिल्लो समय केवल दुई वटा कुराको मात्र प्रतिक्षा हुन्छ । एउटा सलमानको नयाँ फिल्म र अर्को उनको विवाह ।
नयाँ चलचित्र भन्दा पनि उनको विवाहको लागि फ्यानहरु निकै प्रतिक्षित भएको हालौ भाइरल बनेको सलमान र कट्रिनाको बिहेले पुष्टि हुन्छ । त्यसो त सलमान खान र कट्रिना कैफको विवाह भए के होला ? कुनैबेला यस्तो अनुमान सामान्य मानिन्थ्यो । पछि उनीहरुको ब्रेकअप भयो ।
अहिले कट्रिना सिंगल छिन् । साथै उनी पूर्वप्रेमी सलमानकै आसपासमा छिन् । हालैमात्र कट्रिना सलमानको फिल्म ‘भारत’मा देखिइन् । त्यही फिल्मको एउटा भिडियो अहिले भाइरल बनेको हो । जहाँ सलमान खान तथा कट्रीना कैफ विवाह गरिरहेका छन् ।
सलमानको नाम थुप्रै अभिनेत्रीहरुसँग जोडिइसकेको छ । थुप्रै अभिनेत्रीहरुसँग उनको रिलेशनशीप पनि भैरहेको छ, यद्यपि विवाहका कुरामा भने उनी भागिरहेका छन् । वास्तविक जीवनमा सलमान विवाहबाट भाग्ने क्रम जारी नै रहे पनि रील लाइफमा भने उनले धेरै पटक विवाह गरिसकेका छन् ।
सलमानका डिजाइनर एश्ले रिलेबोद्वारा शेयर गरिएको उक्त भिडियोमा सलमानले कट्रीनासंग विवाह गरिरहेको देखिन्छ भने बाँकी मानिसहरुले उनीहरुमाथि फूल वर्षाइरहेका छन् ।
त्यसो त स्वयं सलमानका बुवा सलीम खानले पनि यो प्रसंगमा आफ्ना छोरासंग हार मानिसकेका छन् । उनलाई पनि आफ्नो छोरा दुलाहा बनेको हेर्ने चाहाना राख्दै आएका छन् ।
विश्वमा नै हंगामा मच्चाउने सुन्दर अभिनेत्रीका पाँच बोल्ड तस्विर
एजेन्सी । २० बर्षीय अमेरिकी अभिनेत्री एरियल विन्टरका तस्विरले फेरी हङगामा मच्चाएको छ । विश्वमै सु...
साबित्राले हात पारिन् पहिलो मिस धनकुटाको उपाधी
धनकुटा । धनकुटामा पहिलोपटक भएको मिस धनकुटा –२०१९को उपाधी साबित्रा घिमिरे (रोजा नानु)ले हात पारेकी...
कविता : छोरा खै किन आएनौ ?
दशैमा आउँछु भनेको छोरा खै किन आएनौविदेशी भूमी साहुको काम कि छुट्टी पाएनौ ?सयपत्री फूल्यो मार्सी ध...
‘छ माया छपक्कै’ आज रिलिज
काठमाडौं । दिपकराज गिरीले ‘छक्कापञ्जा’ को सफलतापछि ‘छ माया छपक्कै’ निर्माण गरेका छन्, जुन आज रिलि...
नौहीद सेरुसीको तस्विर यसरी बन्यो रातारात भाइरल
काठमाडौं । बलिउडमा नायीकाहरुले जस्तो तस्विर सार्वजनिक गरे पनि भाइरल बन्छ । त्यसमा पनि अर्धनग्न तस...
सोले फिल्मका कालियाको निधन
मुम्बई । हिन्दी फिल्म सोलेमा कालियाको भूमिका निर्वाह गरेर चर्चा कमाएका विजु खोटेको निधन भएको छ । ...
मामा नभएको मौकामा भान्जा राती माइजुसँग यस्तो हालतमा भेटिएपछि...
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुको यौन लिला एकपछि अर्को गर्दै बजारमा आइरहे...
स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्त गर्न रोक
अधिकृतको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
यौनसम्पर्क गर्न नमानेपछि पत्नीले लोग्नेको लिंग काटिन्
राष्ट्रिय जनगणनामा शिक्षक नखटाइने, ५२ हजार युवालाई अवसर
सुन्दरता बढाउन सेक्स अनिवार्य
शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुल्दै, दोब्बर दरबन्दी माग हुने
शिक्षक सेवा आयोगको अत्यन्त सूचना
शिक्षक सेवाद्वारा सिफारिस गरिएका वैकल्पिक उम्मेदवार